Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FC Abuja si Nigeria & ụwa | TAA
Home Tags FC Abuja
Obi di Kano na-eru uju Chinedu Udoji, na-ekwu na ya bu ego
Faruk Haladu, Onye isi oche nke Kọmitii Pillars nke Kọmitii Pillars, na Monday na Kano kọwara oge Chinedu Udoji mere ka ọ bụrụ ihe onwunwe na onye ọrụ raara onwe ya nye.
Mahadum Maiduguri na Monday kwuru na ọ mepụtara 78 First Class graduates maka usoro 2015 / 2016 na 2016 / 2017.
Ndi otu ndi ochichi nke ndi mmadu (PDP) choro ka ha choo njuju anya banyere nchedo nche nke mara mwakpo Wednesday nke Senate na iwepu nwanyi ya.
Plateau United na-agbazi na Kano Pillars n'elu ọnwụ Zakari Akilu
Plateau United na Wednesday bụ ndị Kano Pillars mere ka ndị odeakwụkwọ ụlọ akwụkwọ ahụ, Zakari Akilu nwụsịrị.
Cleric na-agba ndị Niger ume ka ha chigharịkwuru Chineke
Onye isi oche district, Apostolic Faith, West Africa, Rev. Adebayo Adeniran, gbara ndị Nigeria ume ka ha jiri ekpere na-ekpegara Chineke ekpere, ọ ga-etinyekwa aka na mmekọrịta ya na mmadụ, akụ na ụba, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Femi Falana na-achọ nkowa maka ego ịkwụ ụgwọ mmanụ ụgbọala N1.4
Otu onye na-akwado ndi mmadu, Femi Falana, na Tuesday nyere akwukwo Freedom Information on the Ministry of Petroleum Resources na-achoputa otu ugwo ulo oru gọọmenti gọọmenti N261.4 ijeri kwa afo n'enye aka mmanu ruru N1.4 trillion.
Government Anambra kwadoro nchịkọta ego nchịkwa na ahịa ebe a na-atụgharị uche
Dr. Christian Madubuko, Commissioner maka ahia, ahia, ahịa na akụnụba Creation na Anambra akwụsịtụla nchịkọta ego nchịkọta oge niile na 63 ahịa dị na steeti.